Xildhibaannada Golaha Shacabka oo kulankooda maanta albaabada ka xiranaya warbaahinta – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo kulankooda maanta albaabada ka xiranaya warbaahinta
April 14, 2019 Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa maanta leh kulankoodii 5-aad, oo uu albeebada u xiran yahay. Xildhibaannada ayaa su’aalo weydiinaya Laamaha Amniga Qaranka. Wasiirka Amniga iyo Taliyayaasha Ciidanka ayaa hor imaan doona golaha, ugana jawaabi doona Xildhibaannada weydiimaha ay qabaan.
Waxaa la filayaa in ay Madaxda Laamaha Amnigu siiyaan Golaha Shacabka faahfaahin guud iyo mid gunta hoose ah, oo ku saabsan walaaca xaaladda amni ee dalka, gaar ahaan tan Muqdisho, inta aysan Xildhibaannadu bilaabin su’aalo weydiintooda ka hor.
Guddiga Amniga ee Golaha Shacabka ayaa ka mid noqon doona xubnaha xog-ogaalnimadooda xaaladda amni ee Soomaaliya wax uga dhihi doona. Laakiin, horay looma sii ogaan in ay jirtay wada-shaqeyn kasii wada dhaxeysay guddigaas iyo Hogaanka Laamaha Amniga wadanka.
Xildhibaanno fara badan, oo Kulankii 3-aad diidanaa in saxaafadda dibadda looga saaro Golaha Shacabka, ayaa hadda ku qanacsan go’aanka ay saxaafaddu uga maqnaan doonto tabinta Kuknaka 5-aad ee maanta. Kaliya, waxay warbaahintu tabin doontaa waxay xuuraansato.
Kulankii 4-aad ee shalay ayuu Golaha Shacabku si hordhac ahayd uga dooday amaanka dalka, taas oo la dhihi karo xildhibaannada u haraadan in ay Xukuumadda si adag wax uga weydiiyaan xaaladda amni ee wadanka way muujiyeen shalay waxa ay weydiin doonaan Laamaha Amniga.
Lama oga in Hogaanka Laamaha Amniga ee Golaha hortagaya uu ku jiro Taliska Nabad Sugidda (NISA), kaas oo ay Xildhibaanno horay u hadlay muujiyeen in cidda ay dalbadeen in ay wax ka weydiinayaan amaanka ay NISA hormuud ahayd, laakiin ma jirin xubin ka mid ahayd oo joogtay Kulankii 3-aad ee Golaha, 6-dii bishan.
Warbaahinta oo aan loo ogolaan doonin tabinta Kulanka Golaha Shacabka ee berri
Kulan aan caadi ahayn oo u dhaxeeya Golaha Shacabka iyo Laamaha Amniga oo hadda bilowday